ယုံမှတ်ပြီး ပုံအပ်ထားချင်တယ်ကွာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ယုံမှတ်ပြီး ပုံအပ်ထားချင်တယ်ကွာ
Posted by လင်းဝေ on May 3, 2012 in Business & Economics, Complaint / Claim, Editor's Choice | 25 comments
မနေ့က ကြေးမုံသတင်းစာ ရှေ့မျက်နှာ သတင်းခေါင်းစဉ်ကြီးက မိုက်တယ်။ သို့သော် ဘယ်သူမှ သတိထားမိကြမယ် မထင်သလို သတိထားမိရင်တောင် ဘယ်လိုမှ ခံစားမိကြပုံလည်း မရဘူုးထင်ပါရဲ့။ ဘယ်သူမှ ဘာမှ ပြောသံကို မကြားမိလို့ပါ။ သတိထားမိသူများကလည်း ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်ချေမရှိသော အရာကို ပြောနေတယ်များ မှတ်ယူကြလေသလားမသိပါဘူး။
“ နိုင်ငံသား အားလုံး အကျုံးဝင်စေမည့် လူမှုဖူလုံရေးစနစ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဥပဒေသစ်တစ်ရပ်ပြဌာန်းရေးကြိုးပမ်းနေ ”
တဲ့။ လားလား တကယ့်အကြီးကြီးနော်။
ကိုယ်လည်း မသိပါဘူး အဲဒါကြီးကို မနေ့ကလည်း သတင်းစာမဖတ်ဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ့ ထမင်းစားပြီးချိန်လေး သတင်းစာတစ်စောင် ကို စားပွဲတစ်ခုပေါ်မှာတွေ့လို့ မျက်စိကစားကြည့်တော့ တွေ့မိတဲ့ခေါင်းစဉ်ပါပဲ။
ဒီအကြောင်းကြီးကို ဘောင်းဘီချွတ်အခက် တိုင်းရင်းသား အချက် နဲ့ ဒုသမ္မတ တက်ဖြစ်နေသူက အလုပ်သမားနေ့အခမ်းအနားမှာ အတည်ပေါက်ကြီးပြောတာပါဗျား။
တကယ်တမ်းမှာ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ ဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အလွန်မှ အရေးပါသော။ လူတိုင်းလူတိုင်း၏ ဘဝအာမခံချက် ဘဝလုံခြုံမှု စားဝတ်နေရေး အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေ စတဲ့ လူဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခ နဲ့ ဖြစ်လာရတဲ့ ဘဝမှာ အလွန်အင်မတန်အရေးကြီးသော အချို့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေတာမျိုးအထိ ဖြစ်သွားစေနိုင်သော အခြေအနေမျိုးများကို ကာကွယ်ပေးမည့် အရာကြီးပါပဲ။ လူမှုဖူလုံရေး လို့ပြောရင် မြန်မာပြည်လို ဆိုရှယ်လစ်သူငယ်နာမစင်သလို ဆိုရှယ်လစ်လေဖြန်းရောဂါ ကောင်းကောင်းမပျောက်သေးတဲ့တိုင်းပြည်မှာ အလကားဟာကြီးလို့ပဲ မြင်ကြမှာ သေချာမယ်ထင်ပါရဲ့။ အခုလည်း အစိုးရကပြောတာကို ၅၀၀၀တန်ဖုန်းလောက်တောင် အရေးမထားပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်တက်တာက ပိုအရေးပါတယ်။ နိုင်ငံသားအားလုံအတွက် အကျုံးဝင်မယ့် လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေ ကြီး ဆိုတာကို နည်းနည်းမှကို အထင်မကြီးတော့ပါဘူး။ ဒါဟာလည်း စောစောက သူငယ်နာမစင်တဲ့ သွက်ချာပါဒလိုက်နေသော အစိုးရ ဌာနများရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်၊ ပြည်သူများကို အစိုးရဌာနများက လုပ်ကျွေးပြုစု ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ အချိုးတွေကြောင့်ပဲ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ သူတို့ပြောသမျှစကားတွေကို လမ်းဘေးက အရူးဘိုးတော် အော်နေသလောက်တောင် အလေးဂရုမပြုကြတာလို့ပဲ တွေးဆမိပါတယ်။ ဦးနေဝင်းက စတင်လာသော စစ်တပ်ပုံစံပြောင်းအစိုးရအဆက်ဆက် နဲ့ လက်ရှိ အစိုးရ အပေါ် လူထုယုံကြည်မှု စစ်တမ်းကောက်သင့်ပါတယ်။
တစ်ချို့လုပ်ရပ်တွေ ကလည်း လက်ရှိအစိုးရနဲ့ သူတို့အပေါင်းအပါတွေကို ယုံကြည်မှု ပိုပြီး ကျဆင်းစေပါတယ်။ ဒီနေ့ကြားမိတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ( မှန်၏ ၊ မှား၏ ကိုယ်မသိပါ ) က ဦးအောင်သောင်းဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးပါမစ် ဆိုပြီး ယိုးဒယားနယ်စပ်ကနေ ကားတွေသွင်းနေပါသတဲ့။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီနေ့ပဲ အပြင်သွားရင်း ရွှေဂုံတိုင်က သူ့သားလုပ်တဲ့ အက်စ်၃လုံး ကားအရောင်းနေရာကို ဝင်ကြည့်မိတော့ စလစ်နဲ့ပေးရင် စလစ်ဖိုးလျှော့ပေးပါတယ်တဲ့။ နာမည်ပေါက်လိုချင်ရင် သူတို့မှာထားတဲ့ ကားတွေထဲက ကြိုက်ရာရွေးပြီး စလစ်ကပ်ပြီး အမည်ဖောက်ပေးပါမယ်တဲ့။ ကိုယ်ကြိုက်ရာကားကို တော့ လေလံဆွဲပေးတာ မှာပေးတာတွေတော့ မလုပ်ပေးပါဘူးတဲ့။ ဘယ်လိုကြီးလဲဟ လို့တွေးမိပါတယ်။ ဒီလိုအပြင်သွားရင်း မေးတစ်ခုဝင်လာလို့ဖတ်မိတော့ ဒီလိုပါတဲ့ဗျား။
(ဦးအောင်သောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးပါမစ်ဖြင့် နယ်စပ်မှ ကားများဝင်ရောက်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားမ၀င် သွင်းသည့် ဂျပန် တပတ်ရစ်ကားများ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မြဝတီနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်
မိသားစုစီးနိုင်သည့် ဂျပန်တစ်ပတ်ရစ်ကားများကို ပြည်ထောင်စု အဆင့်
ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်သောင်း၏ပါမစ်ဖြင့် ဝင်ရောက်နေကြောင်း
ရန်ကုန်ကားဝယ်ရောင်းဈေးကွက်မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ )
နောက်တစ်ခုကလည်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပါတီဖျက်သိမ်းခံရမယ်လို့ သတိပေးခံရတဲ့ပါတီ တစ်ခုအကြောင်းပါပဲ။
ဘာဖြစ်လို့ ဖျက်သိမ်းခံရမယ် သတိအပေးခံရသလဲဆိုတော့တဲ့ ပါတီစည်းရုံးရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ လယ်သမားအရေးတွေ မြေသိမ်းခံရတာတွေအတွက် လိုက်လုပ်ပေးနေလို့ပါတဲ့။ ပါတီစာစောင်ထဲမှာ အဲဒီအကြောင်းအရာတွေ ရေးသားဖော်ပြလို့ပါတဲ့။
ကဲ ကောင်းကြသေးရဲ့လား။ ပါတီဆိုတာ ကိုယ့်ပါတီကို လူကြိုက်များရေးအတွက်သာ စည်းရုံးရေးအလုပ်တွေကို လုပ်ရမယ်လို့ မှတ်ယူကြတာလား။ ပါတီဆိုတာ ဘယ်ပါတီဖြစ်ဖြစ် လူထုအကျိုး လူ့အဖွဲ့အစည်း အကျိုးအတွက် ကောင်းရာကောင်းကျိုး နဲ့ တရားမျှတမှုကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ဖို့ နိုင်ငံအရေးကို ဆောက်ရွက်ထမ်းပိုးဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ မဟုတ်လားဗျာ။ ဒီတော့ သူ့မူလ ရည်မှန်းချက်တွေကို လုပ်နေတာ မှားသလားဗျ။ ဒီမိုကရေစီ စနစ်မှာ နိုင်ငံရေးအမြင်မှန်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲသလို နိုင်ငံရေးအမြင်မှန်ကန်သော သူများကို သာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်ထားသင့်ပါတယ် သမ္မတကြီးရယ်။
နောက်တစ်ခု လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆွေးနွေးနေကြတဲ့အချက်ပါပဲ။ တရားသူကြီးတွေ မမှန်မကန် အဂတိလိုက်စားပြီး ဆောင်ရွက်တဲ့ တိုင်းတန်းချက်ပေါင်း ၇၇၀ လောက်ရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီထဲမှာ ၈၀% ကလည်း တိုင်တန်းခံရတဲ့အတိုင်း အဂတိလိုက်စားပြီး မှားယွင်းဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့ တရားသူကြီးများ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ကောင်းရော။ ၈၀% သော တိုင်တန်းတဲ့ အမှုတွေသာ တရားသူကြီးတွေမှားကြောင်း အဂတိလိုက်စားကြောင်း သက်သေပြနိုင်လို့ဖြစ်မယ်။ နောက်တိုင်တဲ့သူကလည်း မတရားခံရသူတွေထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်လဲ လို့ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်တယ်။ တရားသူကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ သူများက မတရားဆုံးဖြတ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာတဲ့အတွက် နစ်နာသူ ဦးရေ ၁၀၀မှာ ဘယ်လောက်ကပဲ ဒီလို တိုင်တန်းဖို့ လက်တံရှည် စိတ်ရှည် တောင့်ခံနိုင်သူများ ဖြစ်မလဲ။ အဲဒီထဲကမှာ သူတို့တိုင်တန်းချက်ကို မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သူက ၈၀% လို့ ဆိုလာပါတယ်။ တော်တော်ရင်လေးစရာပါ။ အခုလက်ရှိ တရားသူကြီးချုပ်နာမည်ကို သိသူ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ အဲဒီ တရားသူကြီးချုပ်ကလည်း လက်ရှိ နိုင်ငံရဲ့စနစ်ကို ဘယ်လောက်များနားလည်ပြီး သူ့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို လေးလေးနက်နက် သဘောပေါက်ရဲ့လား လို့ နည်းနည်း သံသယ ရှိမိတယ်။ အဲဒီ တရားသူကြီးချုပ် ဆိုတာလည်း သမ္မတက ခန့်အပ်ရတာပါ။ နည်းနည်း ပြန်ကြည့်ပါဦး သမ္မတကြီးရယ်။
တကယ်တော့ဗျာ…. ဘယ်သူပဲတက်တက် ကောင်းတာကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ကောင်းတာလုပ်ပေးမယ်လို့ လူတိုင်းပြောတတ်ပါတယ်။ ထိရောက်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရှိဖို့ပဲလိုတာပါ။ ထိရောက်မှန်ကန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သလားဆိုတာလည်း တကယ်လုပ်ကြည့်မှ သိရတာလေ။ အခု လုပ်နေကြတဲ့ လက်ရည်ကိုတော့ မြင်နေရပါပြီ။ လူထုက ယုံကြည်မှု ဆိုတာ လည်း အဲဒီ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်တာပါ။ ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်လုပ်နိုင်ရင် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာ လုပ်ကြစမ်းပါလို့ လွှဲအပ်ထားချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ သိပ်တော်လို့ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရင် ကျုပ်တို့လည်း ဟာဝိုင်အီ၊ဘာလီ၊မော်ဒိုက်ဗ်၊မြေထဲပင်လယ် ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အပျော်ခရီးထွက်လို့ သွားနှပ်နေလိုက်မယ်။ ဒီလိုတွေလည်း ရေးမနေတော့ဘူး။
တစ်ပုဒ်ဆိုတစ်ပုဒ် ထိရောက်တာလေးတွေ ဖတ်ရတော့ အရသာရှိလိုက်တာ
ဟို ကိုဖြူလှကြီး ပြောသလို လက်မလဲ ထောင်သွားပါတယ် နော
ကောင်းတယ်ဗျာ။ လက်မအကြီးကြီး ထောင်ပြီးအားပေးသွားပါတယ်။
ကိုဝေလင်းရေ လက်မထောင်သွားပါတယ် ရှင်။
တော်တော်ဆိုးတဲ့ သူတွေ….အဏာ ပါဝါရ ပြီ ဆိုရင်..လုပ်စားမယ်ဆိုတာချည်းဘဲ…
ဦးလေးရေ … ပျောက်နေတာ အတော်ကြာပြီပဲနော် … တစ်ပုဒ်ဆိုလျှင် ဆိုသလောက် တာသွားတဲ့ပို့စ်ပါပဲ …
(၁) အလုပ်သမား ဘာညာထပ်ဖွဲ့ဆိုပြီးသာ ချဲ့ကားလာတယ် … တကယ်တမ်း လှုမှုဖူလုံရေးနဲ့ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက … အလုပ်သမားတွေအပေါ် အပြည့်ဝ အကာကွယ်ပေးနိုင်သလား ၊ အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ ကြိုးဆွဲအရုပ်ဖြစ်နေသလားဆိုတာကတော့ ကာယကံရှင်တွေပဲ သိပါလိမ့်မယ် ။ အလုပ်သမားတွေဘက်က ရပ်တည်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့စည်းတွေ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေ ၊ ငွေမျက်နှာမကြည့်လျှင် သိပ်ကောင်းမှာပါပဲ … ။ နာမည်ခံသာဖြစ်ပြီး… တကယ်တမ်း(အလုပ်သမား)ကိုယ်တွေ ဘက်က ၊ ကိုယ်တွေ အတွက် ဘာမှ ကာကွယ်မပေးနိုင်တဲ့ နာမည်ခံ အဖွဲ့စည်းတစ်ခုတော့ မလိုချင်မိတာ အမှန်ပါပဲ …. ။ ရင်ထုပြီးသာ ဟစ်ရလျှင်တော့ …. ပြင်းပြင်းရှရှပေါက်ကွဲသံတွေ ထွက်လာကုန်တော့မယ် … ။
(၂) ကားပါမစ်အကြောင်းကတော့ နားမလည်လို့ မပြောတော့ဘူး … အခု လုပ်ခွင့်ရသူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ ဘယ်လို အချိတ်ဆက်လဲဆိုတာတော့ ကြားမိတာလေး နည်းနည်း ရှိပါတယ် .. ဒါပေသိ ..မပြောရဲပါဘူး .. ဟီး ။
(၃) အဂတိလိုက်စားတဲ့ အကြောင်းကတော့ ..ရပေါ်ဆီ လူတန်းစား ၊ အာဏာရှင် လူတန်းစားတွေကြား အရိုးထဲစွဲလာတဲ့ ဘိုးဘွားအမွေလို့တောင် သမုတ်ရတော့မလိုပါပဲ… ။ ဘယ်လိုမှ ပပျောက်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်သေးဘူး … ခေတ်အဆက်ဆက်သာပြောင်းလာပြီး စာရိတ္တတွေသာ ချို့ယွင်းခဲ့တယ် … ဒီလို သမာသမတ် အတုယူမယ့် ကိစ္စမျိုးကျတော့…. ဘယ်သူမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးဘူးပဲ .. ။ ဘာတဲ့ .. ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းနေရာအတွက် စိတ်ပူသတဲ့လား …. ။ မပူပါနဲ့ .. ငကန်းသွားလျှင် ငဆွေတော့ လာစမြဲပါလို့ ပြန်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ် … ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ လုပ်ငန်းသဘောတရားကို တစ်ယောက်တည်း အပိုင်စည်းထားပြီး နောက်လူကိုလည်း … မသင်ခဲ့၊ ဆရာစားကလည်း ချန်ထားတာ .. သူတို့ စားခွက်လုခံရမှာ စိုးတာကြောင့်လေ … ဒါကြောင့် .. ဖင်ဂျွတ်တက်အောင် ထိုင်လည်း .. ထိုင်လို့ကောင်းတုန်း စားလို့ မြိန်တုန်း ဖြစ်နေတာ ..အ ရှက်မရှိတဲ့ဟာတွေ … ။
(၄) .. ဘယ်ပါတီလဲဆိုတာ နာမည်တပ်မပြောပဲနဲ့ … အတပ်သိပါတယ် … ။ ပါတီ ဖျက်သိမ်းစေချင်တဲ့လူတွေက … ရေပေါ်ဆီလူတန်းစားတွေနဲ့ ဦးနှောက်ကြပ်မပြည့်တဲ့ အတ္တ၀ါဒီသမားတွေပဲ ဖြစ်ရမယ် … ။ မတရား သိမ်းခံရတဲ့ နယ်မြေတွေကိုယ်စား … လုပ်ပေးနေတာ ဒီလောက်ဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စကို … ဖျက်သင့်ပါတယ်ဆိုတော့ .. ဘယ် ငဒူ အမတ်က ဒီအဆိုတင်သွင်းပါလိမ့် … ။ အခုနောက်ပိုင်း …မြေဈေးတွေကြောင့် အသစ်ဝယ်ဖို့မပြောနဲ့ ရှိတဲ့မြေလေးတောင်ကုတ်ခြစ်ပြီး ရှာစားနေကြရတာ … ဒီလို မတရား သိမ်းခံရတာကတော့ …. လူမဆန်ရာကျလွန်းပါတယ် .. နေ့ခင်းကြောင်တောင် မိုးကြိုးပစ်ပါစေဟယ် … ။
ကိုနို့စို့မိ ကြီးလိုပဲ လက်မကြီးထောင်ခဲ့တယ်ဗျာ။
တိုင်းပြည်ကောင်းစားကြီးပွားတိုးတက်လာရင်တော့ ၊ သဂျီးဆီသွားလည်မယ် ။ လာ့ဗီးဂတ်စ် မှာ ဗီးနပ်စ်လေးတွေ နဲ့ သွားကဲပစ်လိုက်မယ်ဗျာ ။
တပုဒ်ဆို ဆိုသလောက် ထိလှပါလား ကိုလင်းဝေရေ…
ဘာကိုကြိုက်သလဲ မေးရင်တော့ အကုန်လုံးပဲလို့ ပြောရလိမ့်မယ်
(ကောင်းတာလုပ်ပေးမယ်လို့ လူတိုင်းပြောတတ်ပါတယ်။ ထိရောက်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရှိဖို့ပဲလိုတာပါ။)
ဆိုတာလေး ကုဒ် လိုက်ချင်ပါရဲ့ …..
ခဲ က တစ်လုံးစာမက ပါလား။ ထိချက်ကတော့ ပစ်မလွဲ ပါဘဲ။
ရှင် ပြောသလို “ခင်ဗျားတို့ သိပ်တော်လို့ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရင် ” ဆိုတာ နဲ့ ကျွန်မ တို့ “Dar Dream” တွေ မက် နေကြပါပြီ။
သက်ဆိုင်သူများ နားလည် နိုင်ပါစေ။
တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ အုပ်ချုပ်သူ ကို ချည်းအားကိုးမရ ။ ပြည်သူ/သား တွေပါ ပါရမှာဆိုလဲ ပါချင်စမ်းပါဘိ။
လူထုဦးစိန်ဝင်း ပြောသလို “ပြည်သူတွေကို လူရာ သွင်း” လိုက်ဖို့ လိုမှာပေါ့။
တကယ်တော့ ပြည်သူ တွေဆိုတာ ဟိုလူမှဒီလူမှ မဆွဲတတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်ကို ဂရုတစိုက် ထားရင် မြန်မာပြည်သူ/သား တွေ ဆိုတာ ကျေးဇူးတင်တတ်ပါဘိကနဲ့။
မြင်တတ်တဲ့ သူ မြင်နိုင်နေပါပြီ။
ဒီတော့ ပြင်နိုင်ဖို့ အရည်အချင်း ရှိသူ/ စွမ်းအား ရှိသူ တွေ အချိန်မီ ပြင်သင့်ပါပြီ။
မပြင်ရဲ တာက တိုင်းပြည်အတွက် အားအပြည့် သုံးပြီး ပြင်နိုင်မယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံကြည်ရဲ သူများပါ။
ဒီလိုမျိုး ပြင်သင့်တာပြင်ဖို့ ပြောမဲ့ သူတွေ၊ ပြောသလို လိုက်လုပ်ချင်တဲ့/ လိုက်လုပ်မဲ့ သူတွေ ဒီအချိန်မှာ တကဲ့ ကို အရေးတကြီး လိုနေပါတယ်။
ရှိတော့ရှိမယ်။ ရှားတယ်။ မဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့တော့ ဆုတောင်းပါတယ်။
အားပေးပါတယ်ရှင်။ ဆက်ပါဦး။ :-)
ကိုလင်းဝေရေ……..ယုံစားလို့ ပုံအပ်ထားရင်တော့…….. မွှားမယ်နဲ့တူပါရဲ့ဗျာ…။ ယုံလည်းယုံချင်ပါတယ်……. ယုံလည်းမယုံရဲဘူးဗျ…။ နော့………
ဟာဝိုင်အီ၊ ဘာလီ၊ မော်လ်ဒိုက်ဗ်
ကျုပ်စိတ်ထင်မတော့.. ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေ ခေတ်နဲ့ညီအောင်ညှိတာ အရင်လုပ်ရမယ်လို့ထင်တယ်..
ဒီလိုမဟုတ်ပဲ.. စနစ်တွေကိုသွားသွားပြောင်းနေရင်.. စနစ်တွေဟာ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေရဲ့ (.. ဂီဂီ့ “နားမုဒိန်း” စာသားခိုးချပြောရရင်) မုဒိန်းအကျင့်ခံရမှာပဲ..
အဲဒီလို ရှေးဂွမ်တီးဂွမ်တီးက ခေတ်နဲ့မလျှော်ညီတာတွေကို ခေတ်နဲ့ကိုက်အောင်ညှိတဲ့အခါမယ်.. တည်ဆဲဥပဒေတွေအတိုင်း ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်ဖို့လိုမယ်ထင်မိတယ်..
ဥပဒေအထက် ဘယ်သူမှ(ဘယ်သူမှ) မထားပဲ အလုပ်လုပ်ကြရမယ်..
အဲဒါဆိုမှ.. မြန်မာပြည်ဟာ.. သူများနိုင်ငံတွေလျှောက်နေတဲ့.. လမ်းပေါ်ခြေချမိမှာ..
ကိုလင်းဝေကျော်ရေ “ နိုင်ငံသား အားလုံး အကျုံးဝင်စေမည့် လူမှုဖူလုံရေးစနစ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဥပဒေသစ်တစ်ရပ်ပြဌာန်းရေးကြိုးပမ်းနေ ”
နောက်ဆုံး နိဂုံးချုပ် အပိုဒ်လေး အကြိုက်ဆုံးပဲ အူးလေးရာ..
တစ်ရေးနိုး ပစ်မယ်ဆိုပြီး ကြံထားတဲ့ ဒုံးကျည်တွေလဲ ရမ်းမကုန်ခင် ပစ်လိုက်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်..အူးလေး
တို့လဲ လိုက်မယ် ချန်မထားနဲ့။
တိုင်းပြည်တိုးတက်လာရင် ဟာဝိုင်အီကို မသွားနိုင်ရင်နေပါစေ..
ကိုယ့်တိုင်းပြည်တပတ်ကို..လမ်းခရီးချောမွေ့ ..စိတ်လက်အေးချမ်းစွာ သွားနိုင်ခဲ့ရင်ကို..
လက်ခုပ်အကျယ်ကြီး..မမောတန်း တီးမယ့် ရွှေလူမျိုးတွေပါဗျ..
ဆိုတော့ ..လုပ်ကြပါခေါင်းဆောင်မင်းတို့ရယ်..ယုံကြည်ပြီးလိုက်ခဲ့ပါရစေတော့ ..
အဂတိ လိုက်စားမှု တိုင်းတန်းမှု တွေ ထဲ မှာ ၈၀ ရာနှုံး မှန်တယ် ဆို တာကြီး ကို သစ်ထူးလွင် မှာ တယောက်ထဲ ဖတ်ပြီး ပြုံး ယုံ ပြုံးတာ ရီသံပါ ထွက်သွား ရတာ ဘာကြောင့် ပါလိမ့် လို့ စဉ်းစားမရ ဖြစ်နေတာ၊ ကို လင်းဝေ ရှင်းမှ ဘဲ ရှင်း တော့တယ်။
အရင့်ရောင် ကတော့ ယုန်မှတ်လို့ ဟင်းချို ကျိုသောက်မိတော့မလို့
တကယ်တော့ဗျာ…. ဘယ်သူပဲတက်တက် ကောင်းတာကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ကြိုက်တယ်ဗျာ..ဒီစာသားလေး..ခုတော့ ကိုကမ်းကြီးပြောသလို ဆက်ရေးသား တင်ပြနေကြရ
ကျွန်ယုံ တဖက်ကမ်း.. သားသမီးယုံ စုံလုံးကမ်း..တဲ့
အဆံချောင်တွေ.. သူတို့ သူတို့တွေကို ယုံမိကြရင်…